၂၀၁၉ မှာ အသစ်ထွက်ရှိလာမယ့် နာမည်ကျော် ထိတ်လန့်သည်းဖိုသရဲကား (၃) ကား – For her myanmar
၂၀၁၉ မှာ အသစ်ထွက်ရှိလာမယ့် နာမည်ကျော် ထိတ်လန့်သည်းဖိုသရဲကား (၃) ကား
Posted on April 30, 2019 April 30, 2019 Author Stella	Comment(0)
အမလေး … ကြောက်ရဦးမယ် လန့်ရဦးမယ်
ဒီနှစ်ကတော့ သရဲကားနှစ်လို့တောင် ပြောရမလားမသိဘူး။ ရာဇဝင်မှာ ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ သရဲကားတွေချည်းပဲ ဆက်တိုက်ထွက်လာတော့မယ်ဆိုပဲ။ ဘာကားတွေလဲဆိုတော့ …
(၁) Annabelle Comes Home
Annabelle ကိုတော့ ယောင်းတို့တော်တော်များများသိကြမယ်ထင်တယ်။ The Conjuring ဇာတ်ကားတည်းက စလာလိုက်တဲ့ Annabelle အရှုပ်တော်ပုံက အခုထိမပြီးသေးပါဘူး။ ပရလောကဖြစ်စဉ် စုံစမ်းထောက်လှမ်းသူလင်မယားနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Ed နဲ့ Lorraine တို့နှစ်ယောက်က Annabelle နောက်ထပ်လူတွေကို ဒုက္ခမပေးနိုင်အောင် သူတို့အိမ်က သိုလှောင်ခန်းထဲမှာ သော့ခတ်ပြီး ပိတ်ထားလိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အမွှေစိန် Annabelle က အခန်းထဲမှာရှိတဲ့ မိစ္ဆာတွေကို နှိုးထအောင်လုပ်ပြီး လင်မယားနှစ်ယောက်ရဲ့ (၁၀) နှစ်အရွယ်သမီးလေးနဲ့ ကလေးထိန်းကို ခြောက်လှန့်ပါတော့တယ်။ Conjuring Universe ရဲ့ထုံးစံအတိုင်း ဒီတစ်ခေါက်မှာကော Annabelle တစ်ယောက် ဘယ်လိုတွေလိပ်ပြာလွင့်အောင် ခြောက်ပြဦးမလဲဆိုတာကိုတော့ ဇွန်လ (၂၇) ရက်နေ့မှာ ကြည့်ရှုနိုင်မှာပါ ယောင်းတို့ရေ …
(၂) It : Chapter Two
၂၀၁၇ ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ IT ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားက ကလေးတစ်သိုက်ဟာ အခုချိန်မှာတော့ အရွယ်ရောက်နေတဲ့လူကြီးတွေဖြစ်ကုန်ကြပါပြီ။ Pennywise ကတော့ ထုံးစံအတိုင်းပဲ (၂၇) နှစ်ကြာတော့ ပြန်ရောက်လာတာပေါ့။ ဒီတစ်ခါရော ရဲဘော်ရဲဘက် (၇) ယောက်က Pennywise ကို ဘယ်လို တိုက်ထုတ်မလဲဆိုတာကို ရင်တမမနဲ့ ကြည့်ရှုရဦးမှာပါ။ နာမည်ကျော် ထိတ်လန့်သည်းဖို စာရေးဆရာ Stephan King ရဲ့ ဝတ္ထုကို ပြန်ရိုက်ထားတဲ့ It : Chapter Two က စက်တင်ဘာ (၅) ရက်နေ့မှာ ထွက်ရှိမယ်လို့ သတင်းရထားပြီး အောက်မှာ အမြည်းလေးကြည့်လို့ရပါတယ်။
(၃) Brahms : The Boy 2
The Boy ရဲ့ ပထမကားကတော့ ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာထွက်ရှိခဲ့ပြီး ပရိသတ်တွေ တော်တော်အားပေးတာကို ခံခဲ့ရပါတယ်။ အခုကတော့ Brahms : The Boy2ပါတဲ့။ ဇာတ်လမ်းအသေးစိတ်ကိုတော့ မသိရသေးပေမဲ့ မိသားစုသုံးယောက်က ပထမကားဇာတ်အိမ်တည်တဲ့ အိမ်ကြီးကို ပြောင်းရွေ့လာတဲ့အခါ အရင်ဇာတ်ကားမှာပါတဲ့ အရုပ်နဲ့ သားလေးက ဆော့ကစားမိတာကနေစတယ်လို့တော့ ပြောပြထားပါတယ်။ ဘယ်လိုချောက်ချားစရာတွေ ဖြစ်လာဦးမလဲဆိုတာကတော့ ဇူလိုင် (၂၅) ရက်နေ့မှ ကြည့်ကြတာပေါ့။
ကဲ … ဒါတွေကတော့ မကြာခင်မှာ ထွက်ရှိလာတော့မယ့် သရဲကားတွေအကြောင်းပါပဲ။ ယောင်းတို့ သွားကြည့်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလား?
အမလေး … ကွောကျရဦးမယျ လနျ့ရဦးမယျ
ဒီနှဈကတော့ သရဲကားနှဈလို့တောငျ ပွောရမလားမသိဘူး။ ရာဇဝငျမှာ ကွောကျစရာအကောငျးဆုံးဆိုတဲ့ သရဲကားတှခေညျြးပဲ ဆကျတိုကျထှကျလာတော့မယျဆိုပဲ။ ဘာကားတှလေဲဆိုတော့ …
Annabelle ကိုတော့ ယောငျးတို့တျောတျောမြားမြားသိကွမယျထငျတယျ။ The Conjuring ဇာတျကားတညျးက စလာလိုကျတဲ့ Annabelle အရှုပျတျောပုံက အခုထိမပွီးသေးပါဘူး။ ပရလောကဖွဈစဉျ စုံစမျးထောကျလှမျးသူလငျမယားနှဈယောကျဖွဈတဲ့ Ed နဲ့ Lorraine တို့နှဈယောကျက Annabelle နောကျထပျလူတှကေို ဒုက်ခမပေးနိုငျအောငျ သူတို့အိမျက သိုလှောငျခနျးထဲမှာ သော့ခတျပွီး ပိတျထားလိုကျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ အမှစေိနျ Annabelle က အခနျးထဲမှာရှိတဲ့ မိစ်ဆာတှကေို နှိုးထအောငျလုပျပွီး လငျမယားနှဈယောကျရဲ့ (၁၀) နှဈအရှယျသမီးလေးနဲ့ ကလေးထိနျးကို ခွောကျလှနျ့ပါတော့တယျ။ Conjuring Universe ရဲ့ထုံးစံအတိုငျး ဒီတဈခေါကျမှာကော Annabelle တဈယောကျ ဘယျလိုတှလေိပျပွာလှငျ့အောငျ ခွောကျပွဦးမလဲဆိုတာကိုတော့ ဇှနျလ (၂၇) ရကျနမှေ့ာ ကွညျ့ရှုနိုငျမှာပါ ယောငျးတို့ရေ …
၂၀၁၇ ကထှကျရှိခဲ့တဲ့ IT ရုပျရှငျဇာတျကားက ကလေးတဈသိုကျဟာ အခုခြိနျမှာတော့ အရှယျရောကျနတေဲ့လူကွီးတှဖွေဈကုနျကွပါပွီ။ Pennywise ကတော့ ထုံးစံအတိုငျးပဲ (၂၇) နှဈကွာတော့ ပွနျရောကျလာတာပေါ့။ ဒီတဈခါရော ရဲဘျောရဲဘကျ (၇) ယောကျက Pennywise ကို ဘယျလို တိုကျထုတျမလဲဆိုတာကို ရငျတမမနဲ့ ကွညျ့ရှုရဦးမှာပါ။ နာမညျကြျော ထိတျလနျ့သညျးဖို စာရေးဆရာ Stephan King ရဲ့ ဝတ်ထုကို ပွနျရိုကျထားတဲ့ It : Chapter Two က စကျတငျဘာ (၅) ရကျနမှေ့ာ ထှကျရှိမယျလို့ သတငျးရထားပွီး အောကျမှာ အမွညျးလေးကွညျ့လို့ရပါတယျ။
The Boy ရဲ့ ပထမကားကတော့ ၂၀၁၆ ခုနှဈမှာထှကျရှိခဲ့ပွီး ပရိသတျတှေ တျောတျောအားပေးတာကို ခံခဲ့ရပါတယျ။ အခုကတော့ Brahms : The Boy2ပါတဲ့။ ဇာတျလမျးအသေးစိတျကိုတော့ မသိရသေးပမေဲ့ မိသားစုသုံးယောကျက ပထမကားဇာတျအိမျတညျတဲ့ အိမျကွီးကို ပွောငျးရှလေ့ာတဲ့အခါ အရငျဇာတျကားမှာပါတဲ့ အရုပျနဲ့ သားလေးက ဆော့ကစားမိတာကနစေတယျလို့တော့ ပွောပွထားပါတယျ။ ဘယျလိုခြောကျခြားစရာတှေ ဖွဈလာဦးမလဲဆိုတာကတော့ ဇူလိုငျ (၂၅) ရကျနမှေ့ ကွညျ့ကွတာပေါ့။
ကဲ … ဒါတှကေတော့ မကွာခငျမှာ ထှကျရှိလာတော့မယျ့ သရဲကားတှအေကွောငျးပါပဲ။ ယောငျးတို့ သှားကွညျ့ဖို့ အဆငျသငျ့ဖွဈနပွေီလား?
Tagged annabelle, conjuring universe, Horror, IT, Movie, upcoming
Posted on August 16, 2018 May 15, 2019 Author Sugar Cane
Posted on February 14, 2019 February 14, 2019 Author Stella
Posted on January 24, 2019 January 24, 2019 Author Sugar Cane
ဒီနှစ်ထဲမှာ ပြန်ခေတ်စားလာနိုင်တဲ့ ၉၀ ခုနှစ်ဝန်းကျင်က ဆံပင်ပုံစံ (၅) မျိုး